नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले संविधानसभाको व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०६८�६९ को बजेट वक्तव्यबारे उपलब्ध पी.वी.एम. र सी.सी.एम.हरुसमेत उपस्थित भएको ने.क.पा. (मसाल)को केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले छलफल गरी त्यसबारे निम्नलिखित दृष्टिकोण निश्चित गरेको छ ।
अहिलेको बजेटको सबैभन्दा कमजोरी यो रहेको छ त्यो मुख्यरुपले वितरणमुखी छ । कुनै देशको आर्थिक विकासका लागि उत्पादनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । त्यस अनुसार उद्योग र अहिलेको देशको स्थिति अनुसार कृषिको विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । तर त्यो पक्षलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेमा अनुत्पादक खर्चलाई नै बढी प्रमुखता दिइएकोछ । उत्पादनमा वृद्धि नगरिकन वितरणमा बढी जोड दिने नीतिको सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा घातक परिणाम हुने सम्भावना हुन्छ ।
महंगी आज देशको अत्यन्त गम्भीर समस्या बनेको छ । प्रस्तुत बजेटबाट त्यसमाथि नियन्त्रण हुने कुनै सम्भावना देखिन्न । अहिले राष्ट्रिय आयको प्रतिशत अत्यन्त निम्न स्तरमा पुगेको छ । त्यो अवस्थामा सुधार हुने सम्भावना पनि देखिंदैन । बजेटमा पञ्चेश्वर परियोजना सहित देशको जलसम्पदा सम्बन्धी कैयौं असमान सन्धिहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता प्रकट गरिएको छ । त्यस प्रकारको नीतिबाट देशको अर्थतन्त्रमा अत्यन्त घातक असर पर्ने कुरा प्रष्ट छ । भूमण्डलिकरण र विश्व व्यापार संगठनका विभिन्न गलत नीतिहरुको असर पनि बजेटमा परेको देखिन्छ ।
उक्त कमजोरीका साथै बजेटमा आंशिक रुपमा कतिपय सकारात्मक पक्षहरु पनि छन् । ३ खम्वे आर्थिक नीति अन्तर्गत सरकारी र निजीका साथै सहकारी नीतिलाई पनि बजेटले महत्वपूर्ण स्थान दिएको छ । समाजका विभिन्न विपन्न, शोषित, उत्पीडित वर्ग वा जनसमुहहरुलाई विभिन्न प्रकारका सहायता वा अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । तात्कालिक रुपमा त्यस प्रकारका सहायताहरुबाट केही राहत पुग्नसक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । तर उक्त कार्यक्रमका सन्दर्भमा दुईवटा कुराहरु माथि पनि हाम्रो ध्यान गएको छ ः प्रथम, त्यस प्रकारका सबै कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनबारे शंका छ । द्वितीय, सहकारिता वा अन्य विभिन्न रुपमा दिइने सहायताको निष्पक्ष रुपले वितरण हुने र त्यसबाट लक्षित वर्गका जनसमुदायहरुलाई मद्दत पुग्नेभन्दा दलीय आधारमा दुरुपयोग हुने नै बढी सम्भावना प्रति पनि हाम्रो ध्यान गएको छ ।
बजेटका उपरोक्त बेग्लाबेग्लै पक्षमाथि तुलनात्मक रुपले विचार गरिसकेपछि ने.क.पा. (मसाल)को केन्द्रीय कार्यालयले त्यसलाई आलोचना सहित समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मिति ः २०६८ श्रावण ०३ गते